Yasaka ကတ်ကြေးနှင့်အညှပ် | Yasaka ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကတ်ကြေး - ဂျပန်ကတ်ကြေး
ပင်မစာမျက်နှာ / Yasaka ဆံပင်အလှပြုပြင်ရေးကတ်ကြေး / 1 ၏စာမျက်နှာ 2
Yasaka ညှပ်ဖြတ်တောက်ခြင်း 7.0 လက်မဘာဘာ
Yasaka ကပျကြေး $ 379.00 AUD $ 449.00 AUD
Yasaka Professional Barber ဆံပင်ညှပ် Set
Yasaka ကပျကြေး $ 599.00 AUD $ 799.00 AUD
Yasaka YS 6.0 လက်မဆံပင်ပါးလွှာသောကတ်ကြေး
Yasaka ကပျကြေး $ 349.00 AUD $ 499.00 AUD
Yasaka ကပျကြေး $ 399.00 AUD $ 499.00 AUD
Yasaka SSS Japan VG10 ကတ်ကြေးဖြတ်ခြင်း
Yasaka ကပျကြေး $ 449.00 AUD $ 649.00 AUD
Yasaka ရိုးရာဆံပင်ညှပ်ကတ်ကြေး Set
Yasaka KM ဆံပင်ညှပ်ဖြတ်
Yasaka ကပျကြေး $ 449.00 AUD
Yasaka YS-30 ၆ လက်မဆံပင်ပါးလွှာသောကတ်ကြေး
Yasaka ကပျကြေး $ 399.00 AUD $ 569.00 AUD
Yasaka ကပျကြေး $ 499.00 AUD
Yasaka ဘာဘာကတ်ကြေး 3pc မာစတာသတ်မှတ်မည်
Yasaka ကပျကြေး $ 949.00 AUD
Yasaka Deluxe K-107လက်မဘာဘာကတ်ကြေး
Yasaka ကပျကြေး $ 499.00 AUD $ 599.00 AUD
Yasaka Professional က K-10 Deluxe ဆံညှပ်အစုံ
Yasaka ကပျကြေး $ 699.00 AUD $ 749.00 AUD
Yasaka KE ဆံပင်ညှပ်ကတ်ကြေး
Yasaka ကပျကြေး $ 399.00 AUD
Yasaka SA ဂန္ထဝင်တိကျသောညှပ်
Yasaka 5.0 လက်မရိုးရာဖြတ်တောက်ခြင်းညှပ်
Yasaka ကပျကြေး $ 349.00 AUD
Yasaka L ကို 6.5 လက်မဆံပင်ဖြတ်တောက်ခြင်းကတ်ကြေး
အကြောင်းပို Read Yasaka ဆံပင်အလှပြုပြင်ရေးကတ်ကြေး
Yasaka Seiki ကုမ္ပဏီလီမိတက်, ဂျပန်သည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဂျပန်ကတ်ကြေးနှင့်ညှပ်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။
သူတို့ကပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်ဘို့နိုင်ငံတကာကကျော်ကြားဖြစ်ကြသည် Yasaka အရည်အသွေးမြင့်ပြီးစင်ကြယ်သော Japan သံမဏိမှညှပ်။
၏ထူးခြားသောခိုင်မာသော Yasaka ကတ်ကြေးသည်ကြာရှည်ခံနိုင်သောကတ်ကြေးများအတွက်ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ ပွန်းပဲ့ခြင်း၊ ချေးခြင်းနှင့်ခြုံငုံ။ ခံနိုင်ရည်ရှိစေသည်။
Japan Scissors Australia သည်တရားဝင်ရောင်းချသူဖြစ်သည် Yasaka ထုတ်ကုန်ညှပ်! ပရီမီယံအတွက်အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းများ Yasaka ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းနှင့်ဆံညှပ်။
အကြောင်းပို Read Yasaka
Yasaka ယေဘုယျအားဖြင့်၎င်း၏ချွန်ထက်သောဖြတ်တောက်မှုများကြောင့်ကျော်ကြားသော Clam ပုံစံဓါးကိုအသုံးပြုသည်။ Yasaka Shears သည်ခေတ်မီအင်ဂျင်နီယာနှင့်ရိုးရာကျွမ်းကျင်သောလက်မှုပညာရှင်များနှင့်အဆင့်မြင့်ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းနှင့်ဆံပင်ညှပ်ညှပ်ညှပ်ညှပ်ညှပ်ညှပ်ညှပ်ညှပ်ညှပ်ညှပ်ညှပ်ညှပ်ညှပ်ခြင်းအဆင့်အတန်းမြင့်မားစွာထုတ်လုပ်ရန်အစဉ်အလာကျွမ်းကျင်သည့်လက်မှုပညာရှင်များနှင့်အရည်အသွေးမြင့်မားသောထိန်းချုပ်မှုများဖြင့်ဒီဇိုင်းများကိုအသုံးပြုသည်။
YASAKA SEIKI CO.LTDကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုခြင်းနှင့်အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းများနှင့်အတူအကောင်းဆုံးဂျပန်ဆံပင်ညှပ်ညှပ်အဖြစ်သူတို့ရဲ့တသမတ်တည်းအရည်အသွေးကြောင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရသည်။ Yasaka Shears သည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တိုင်း၏လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသောအမျိုးမျိုးသောညှပ်အမျိုးမျိုးကိုပေးသည်။
မှ Yasaka မှ Offset လက်ကိုင်ညှပ် Yasaka ၇ လက်မရှိသောဘာဘာညှပ်များ၊ စုံတွဲတစ်တွဲစီကိုဂရုစိုက်မှုနှင့်ပြိုင်ဘက်ကင်းသောအတွေ့အကြုံများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။
Yasaka ကတ်ကြေးသြစတြေးလျ အရည်အသွေးမြင့်မားသောထုတ်လုပ်မှု၊ အဆင့်မြင့်ဂျပန်သံမဏိနှင့်တတ်နိုင်သောစျေးနှုန်းများကြောင့် ၂၀၂၀ ခုနှစ်မှစ၍ လူကြိုက်အများဆုံးဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကတ်ကြေးတံဆိပ်ဖြစ်လာသည်။
သြစတြေးလျပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆံပင်အလှပြုပြင်သူများအတွက်အလားတူအတွဲတစ်ခုကိုဝယ်သည် Yasaka ဂျပန်မှအနိမ့်အမြင့်ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ အထိကုန်ကျနိုင်သည် Yasaka ဆံပင်စက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့အကြိုက်ဆုံးရွေးချယ်မှု။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့စုဆောင်းမှု browse Yasaka သြစတြေးလျနှင့်နိုင်ငံတကာတွင်ရောင်းရန်ကတ်ကြေး။ ညှပ်တစ်ခုချင်းစီသည်ပါးလွှာသောအသေးစိတ်ဒီဇိုင်းရှိပြီးရှုပ်ထွေးသော၊ လက်ကိုင်ထားသည့်ဂျပန်လက်ကိုင်များဖြစ်သည်။ Yasaka သငျသညျအင်အားစိုက်ထုတ်, တိကျဖြတ်တောက်မှုများအတွက်အများဆုံးထိန်းချုပ်မှုပေးသည်။ ဤချွတ်ယွင်းချက်ကင်းသောကတ်ကြေးများသည်သင့်အားအကောင်းဆုံးဆံပင်အလှပြုပြင်သည့်ကတ်ကြေးတံဆိပ်တံဆိပ်အဖြစ်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာရှည်စွာတည်ရှိလိမ့်မည်။
သင်သိရန်လိုအပ်သမျှ Yasaka ကတ်ကြေးတံဆိပ်
Yasaka Seiki သည်ဂျပန် Nara တွင်တည်ရှိသည်။ သင်၏နောက်ညှပ်ညှပ်ညှပ်များကို ၀ ယ်ယူသောအခါသင်သည်“ ဤဂျပန်စစ်မှန်မှန်မှန်ပါသလော” ဟုသင့်ကိုသင်မေးနိုင်သည်။
Yasaka ၎င်းသည်တကယ့်အပေးအယူဖြစ်ပြီးစက်မှုလုပ်ငန်းတွင်ဂျပန်လူသိများသောဆံပင်အလှပြုပြင်သည့်ကတ်ကြေးထုတ်လုပ်သူတစ် ဦး ဖြစ်ရန်အချိန်ကြာမြင့်စွာရှိခဲ့သည်။ အများစုမှာ YasakaScissors များကို Hitachi ATS-314 (440c) ကာဗွန်သံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်ပြီး Rockwell Hardness စကေး ၆၁-၆၄ HRC ဖြင့်ပြုလုပ်သည်။
Hitachi ATS-314 သံမဏိသည်အလွန်ခက်ခဲသောကာဗွန်အမှုန်များနှင့်ပြုလုပ်ထားသောဓာတုပစ္စည်းဖြစ်ပြီးဓားများနှင့်အခြားအသုံးချပရိုဂရမ်များညှပ်ခြင်းများတွင်အသုံးပြုသည်။ အပ်ချုပ်၊ မွန်ဆိုင်းနှင့်ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းသင်တန်း။ Hitachi သံမဏိသည်သတ္တုတွင်ပါသောခရိုမီယမ်ကြောင့်ချေးခြင်းခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
ATS-314 မှပြုလုပ်သောကတ်ကြေးများသည်ပျော့ပျောင်း။ သက်တမ်းရှည်သည်။ ATS-314 အစွန်းကိုင်နိုင်သောစွမ်းရည်သည် VG-10 သံမဏိဟောင်းများထက်သာလွန်သည်။ ၎င်းကိုပိုမိုပြတ်သားသည့်အစွန်းသို့ချွန်စေနိုင်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်ပိုမိုမြင့်မားသောမာကျောမှုတွင်အနည်းငယ်ကြာရှည်ခံသည်။ Hitachi ၏ ATS-314 အပေါ် VG-10 (Takefu Special Steel) နှင့်နှိုင်းယှဉ်သည်။
သံမဏိကိုယ်ထည်သည်တည်ငြိမ်မှု၊ ကြံ့ခိုင်မှု၊ ချွန်ထက်မှု၊ ၀ တ်ဆင်နိုင်မှုနှင့်သံမဏိများရှိသော်လည်းသံမဏိများအတွက်မျှတသောသံမဏိဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည်
အားလုံး Yasaka ညှပ်များကိုရိုးရာဓားဖြင့်ပြုလုပ်သောဓားဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးယခုအနှစ် ၁၀၀ ကျော်ကြာသည်။ သို့သော် Yasakaနောက်ဆုံးပေါ်ဓါးများကိုကတ်ကြေးတံဆိပ်စက်ရုံများအတွက်ပထမဆုံးသောထူးခြားသောခေတ်မီနည်းဖြင့်သုတ်လိမ်းထားသည်။ ညှပ်ဓါးသွားများသည်မာကျောစေပြီးလေမှုတ်ထုတ်ထားသောအလုံပိတ်အခန်းထဲတွင်နောက်ပိုင်းတွင်လောင်ကျွမ်းသွားသည်။
လေဟာနယ်လောင်ကျွမ်းခြင်းဖြစ်စဉ်များကိုလုပ်ဆောင်ပြီးသောအခါဓါးကိုပိုမိုခိုင်မာစေရန်သုညသုညကုသမှုကိုပြုလုပ်သည်။ ၏ထူးခြားသောခိုင်မာသော Yasaka ကတ်ကြေးသည်ကြာရှည်ခံနိုင်သောကတ်ကြေးများအတွက်ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ ပွန်းပဲ့ခြင်း၊ ချေးခြင်းနှင့်ခြုံငုံ။ ခံနိုင်ရည်ရှိစေသည်။
Yasaka ယေဘုယျအားဖြင့် Clam ပုံစံဓါးဖြင့်အသုံးပြုသည်။ အကြောင်းရင်းများစွာကဲ့သို့ပင်သူတို့၏အားစိုက်ထုတ်ချွန်ထက်သောဖြတ်တောက်မှုများကိုထုတ်လုပ်သည်ဟူသောကျော်ကြားမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ Yasaka Shears သည်ခေတ်မီအင်ဂျင်နီယာနည်းစနစ်များနှင့်ဒီဇိုင်းများကိုရိုးရာကျွမ်းကျင်သောလက်မှုပညာရှင်များရော၊ ကျွမ်းကျင်သောအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုရောနှောပေါင်းစပ်ထားသည့်အတွက်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းနှင့်ဆံပင်ညှပ်ခြင်းအဆင့်အတန်းမြင့်မားစွာထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိသည်။
YASAKA SEIKI CO.LTD အကောင်းဆုံးသောစျေးနှုန်းများအတွက်အကောင်းဆုံးဂျပန်ဆံပင်ညှပ်ညှပ်များဖြစ်သောကြောင့်သူတို့၏ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုကြသည်။
ဂျပန်ပုံစံဓါးသွားများကဲ့သို့ပင် Yasake သည်ခုံးဒီဇိုင်းကိုအသုံးပြုသည်။ ကျော်ကြားသောခုံးအစွန်းကိုဖန်တီးရန် Clam ပုံသဏ္theာန်သည်ဓါး၏ဘေးတစ်ဖက်စီတွင် rounded ပုံစံဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ခုံးဓါးအမျိုးအစားသည် ATS-314 ကဲ့သို့သောသံမဏိပစ္စည်းများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်အစိုင်အခဲထက်ပိုသောအနားစွန်း၏ထက်မြက်မှုကိုထိန်းထားသဖြင့်ကြာရှည်စွာတည်ရှိနေပြီး ATS-314 ၏လက်တွေ့အသုံးချမှုဆုံးရှုံးမှုကိုတန်ပြန်သည်။
သို့သော်, ခုံးအနားမှအဓိကကျသည့်အချက်တစ်ခုမှာ Sharpening သည်အထူးကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အတွေ့အကြုံလိုအပ်သည်။ Convex အစွန်းသည်လက်ဖြင့်ပြီးမြောက်ရန်အမှန်ပင်ခက်ခဲပြီးအထူးသဖြင့်အထူးပြုလုပ်ထားသောကြိတ်ခွဲစက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ခုံးဓါးသွားပြန်လည်တပ်ဆင်ခြင်းအတွက် ကျေးဇူးပြု၍ ဂျပန်ဓါးသွားများနှင့်အတွေ့အကြုံရှိသည့်ဒေသခံအထူးကုဆရာ ၀ န်ကိုရွေး။ ခုံးအနားသတ်ဓါးများကိုအထူးသဖြင့်ရွေးချယ်ပါ။
ဒီမှာငါတို့စာရင်းအပြည့်အစုံပါ Yasaka ဆံပင်ညှပ်ခြင်းနှင့်ပါးလွှာသောအညှပ်။
Yasaka ညှပ် & Models ဖြတ်တောက်
မော်ဒယ်နံပါတ် ပစ္စည်း အရွယ်
SS45 ATS314 ကိုဘော့သံမဏိ ၂၆ လက်မ
SS50 ATS314 ကိုဘော့သံမဏိ ၂၆ လက်မ
SM-55 ATS314 ကိုဘော့သံမဏိ ၂၆ လက်မ
က M-60 ATS314 ကိုဘော့သံမဏိ ၂၆ လက်မ
L-65 ATS314 ကိုဘော့သံမဏိ ၂၆ လက်မ
SS450 ATS314 ကိုဘော့သံမဏိ ၂၆ လက်မ
S500 ATS314 ကိုဘော့သံမဏိ ၂၆ လက်မ
SM550 ATS314 ကိုဘော့သံမဏိ ၂၆ လက်မ
M600 ATS314 ကိုဘော့သံမဏိ ၂၆ လက်မ
Y က-50 ATS314 ကိုဘော့သံမဏိ ၂၆ လက်မ
Y က-55 ATS314 ကိုဘော့သံမဏိ ၂၆ လက်မ
ကီလိုမီတာ ၅.၅ ATS314 ကိုဘော့သံမဏိ ၂၆ လက်မ
ခြောက်သွေ့ ၅.၅ ATS314 ကိုဘော့သံမဏိ ၂၆ လက်မ
DRY-5.5W ဖြစ်သည် ATS314 ကိုဘော့သံမဏိ ၂၆ လက်မ
DRY-6.0W ဖြစ်သည် ATS314 ကိုဘော့သံမဏိ ၂၆ လက်မ
ပြောလေ VG10 ကိုဘော့သံမဏိ ၂၆ လက်မ
ဖြတ်တောက်ခြင်း ATS314 ကိုဘော့သံမဏိ ၂၆ လက်မ
YA5.0 ATS314 ကိုဘော့သံမဏိ ၂၆ လက်မ
YA5.5 ATS314 ကိုဘော့သံမဏိ ၂၆ လက်မ
YA6.0 ATS314 ကိုဘော့သံမဏိ ၂၆ လက်မ
SK ကို-6.0 ATS314 ကိုဘော့သံမဏိ ၂၆ လက်မ
SK ကို-7.0 ATS314 ကိုဘော့သံမဏိ ၂၆ လက်မ
ကိုဘော့ဖြတ် K-10 ATS314 ကိုဘော့သံမဏိ ၂၆ လက်မ
ပြင်သစ်ဖြတ်တောက်ခြင်း F-CUT VG10 ကိုဘော့သံမဏိ ၂၆ လက်မ
လက်ဝဲ ၅.၀ (ဘယ်) 440C သံမဏိ ၂၆ လက်မ
KE-50 440C သံမဏိ ၂၆ လက်မ
KE-55 440C သံမဏိ ၂၆ လက်မ
KE-60 440C သံမဏိ ၂၆ လက်မ
လုပ် SA-5.5 440C သံမဏိ ၂၆ လက်မ
လုပ် SA-6.0 440C သံမဏိ ၂၆ လက်မ
၏လုပ် SA-5.5 440C သံမဏိ ၂၆ လက်မ
၏လုပ် SA-6.0 440C သံမဏိ ၂၆ လက်မ
Yasaka ပါးလွှာ & Texturizing ညှပ်မော်ဒယ်များ
YS-160 ATS314 ကိုဘော့သံမဏိ ၁၄ သွား
YS-200 ATS314 ကိုဘော့သံမဏိ ၁၄ သွား
YS-300 ATS314 ကိုဘော့သံမဏိ ၁၄ သွား
YS-400 ATS314 ကိုဘော့သံမဏိ ၁၄ သွား
YS-10W ATS314 ကိုဘော့သံမဏိ ၁၄ သွား
YS-12W ATS314 ကိုဘော့သံမဏိ ၁၄ သွား
YS-28WW ATS314 ကိုဘော့သံမဏိ ၁၄ သွား
YS-30S ATS314 ကိုဘော့သံမဏိ ၁၄ သွား
YS-30W ATS314 ကိုဘော့သံမဏိ ၁၄ သွား
YS-30T ATS314 ကိုဘော့သံမဏိ ၁၄ သွား
YS-30WOF ATS314 ကိုဘော့သံမဏိ ၁၄ သွား
YS-30TOF ATS314 ကိုဘော့သံမဏိ ၁၄ သွား
SK30T ပုံမှန် Edge ATS314 ကိုဘော့သံမဏိ ၁၄ သွား
SK30T ဆန့်ကျင်ဘက် Edge ATS314 ကိုဘော့သံမဏိ ၁၄ သွား
SK40T ပုံမှန် Edge ATS314 ကိုဘော့သံမဏိ ၁၄ သွား
SK40T ဆန့်ကျင်ဘက် Edge ATS314 ကိုဘော့သံမဏိ ၁၄ သွား
၏လုပ် SA-30 440C သံမဏိ ၁၄ သွား
အဘယ်ကြောင့် Yasaka ကတ်ကြေးသည်လူကြိုက်အများဆုံးဂျပန်ကတ်ကြေးတံဆိပ်ဖြစ်သည်
လက်ဝဲဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းမှကျားမ ၇ လက်မအထိဂျပန်နိုင်ငံရှိ Offset Ergonomic ကတ်ကြေးများအထိ၊ သင်အားအထင်ကြီးစေလိမ့်မည်။ Yasaka ကတ်ကြေးဂျပန်။
အကယ်၍ သင်သည်သြစတြေးလျ၌ဂျပန်ဆံပင်ကတ်ကြေးထုတ်လုပ်သူများကိုရှာဖွေနေသည်ဆိုလျှင်၊ ဂျပန်ကတ်ကြေးတွင်သြစတြေးလျတွင်ဆံပင်အလှပြုပြင်သည့်ကတ်ကြေးရှိသည် YasakaAustralianစတြေးလျပညာရှင်များကကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုနေတဲ့ဘယ်သန်၊ လက်ယာ၊ ပါးလွှာမှု၊ ဖြတ်တောက်မှု၊ ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်း၊ ဆံပင်ညှပ်၊
အကယ်၍ သင်သည်ဆာမူရိုင်းကတ်ကြေးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းကိုရှာဖွေနေသည်ဆိုပါကအရည်အသွေးကိုရှင်းပြသည် Yasaka ကတ်ကြေးများ၊ အကောင်းဆုံးဂျပန်ကတ်ကြေးများအကြောင်း၊ အကောင်းဆုံးကတ်ကြေးများကိုမည်သို့ရွေးချယ်ရမည်နှင့်မည်ကဲ့သို့အမှန်တကယ်ထိန်းသိမ်းရမည်ကိုသတင်းအချက်အလက်ပေးရန်ရည်ရွယ်သည်။
သင်ကနေဒါတွင်ဆံသဆရာတ ဦး အလုပ်ကိုလုပ်နေသည်ဖြစ်စေ၊ အမေရိကန်နိုင်ငံမှဝါရင့်ဆံပင်ညှပ်သမားတစ်ယောက်လားပဲဖြစ်ဖြစ်၊ Yasaka ဆံပင်ညှပ်သည်ပါးလွှာသောဆံပင်မှအထူအထိဖြတ်တောက်ရန်လိုအပ်သောကတ်ကြေးအမျိုးမျိုးရှိသည်။
သံမဏိ၏အရည်အသွေးမြင့်မားသည်၊ ကြာရှည်ခံ၊ ချွန်ထက်။ ၊
အကြောင်းပိုမို Read Yasaka ဒီမှာ ScissorHub မှာကတ်ကြေး!
အရည်အသွေးမြင့်သံမဏိ၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမှာ၎င်း၏ပေါ့ပါးသည့်စွမ်းရည်ဖြစ်ပြီး၊ အချိန်ကြာရှည်စွာဖြတ်တောက်ရာတွင်အလေးချိန်၊ strain နှင့်ဖိအားကိုလျှော့ချပေးသည်။
အသုံးပြုသောဂျပန်သံမဏိ၏လက္ခဏာ Yasaka ကတ်ကြေးသည်၎င်း၏မာကျောမှုတွင်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်သံမဏိများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက ၀ တ်ဆင်။ မျက်ရည်နှင့်ပွန်းပဲ့ခြင်းခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
Yasaka ကတ်ကြေးတံဆိပ်များသည်ညှပ်ကမ္ဘာတွင်ထူးခြားသောချွန်ထက်သောနည်းစနစ်ဖြင့် ဦး ဆောင်သည်။ ကတ်ကြေးများကိုမာကြော။ ခိုင်မာအောင်လေဟာနယ်ဖြင့်လောင်ကျွမ်းသည်။ ဓါးသွား၏အစွန်ကိုကတ်ကြေးထုတ်လုပ်မှု၏နောက်ဆုံးနိဂုံးအထိအမှတ်အဖြစ်ချဲ့ပေးခဲ့သည်။
လေဟာနယ်လောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်စဉ်ပြီးနောက်မာကျောမှုနှင့်ထက်မြက်မှုကိုတိုးတက်စေရန်အတွက်ကတ်ကြေးများအားရေအေး - သုညခွဲသုညကုသမှုပေးသည်။
သြစတြေးလျမှာဂျပန်ဆံပင်ကတ်ကြေးထုတ်လုပ်သူတွေရှာနေလား၊ Yasaka သင်က ၀ ယ်ရန်ခွင့်ပြုထားသောစျေးနှုန်းချိုသာသောကတ်ကြေးများကို Japan Scissors တွင်ရောင်းသည် Yasaka Offset ကတ်ကြေးသို့မဟုတ်ဘာဘာအစုံ။
အဆိုပါ Yasaka Scissors အစုံတွင် ၅.၅ လက်မ၊ ၆ လက်မနှင့် ၇ လက်မဖြတ်တောက်မှုညှပ်နှင့် ၆ လက်မအရွယ်ပါးလွှာသောကတ်ကြေးပါဝင်သည်။ ကျွမ်းကျင်သောပညာရှင်များကအလွန်ကောင်းမွန်သောအနားသတ်ကတ်ကြေးစျေးနှုန်းများဖြင့်ဂျပန်ကတ်ကြေးများအားလူကြိုက်အများဆုံးအွန်လိုင်းဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းစတိုးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရာရှိတ ဦး အကြောင်းပိုမိုဖတ်ပါ Yasaka ဤနေရာတွင်ဂျပန်ညှပ်လမ်းညွှန်။